Instagram မှာ အားပေးခံရဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Top Star4ဦး
12 Mar 2018 . 6:48 PM
Instagram မှာ အားပေးခံရဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့Top Star4ဦး
Instagram ဆိုတာက Facebook ပြီးရင် အသုံးများဆုံး လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုပါ။ Facebook နဲ့မတူတာက Instagram မှာ High Resolution ပုံတွေ၊ အဆင့်တန်းမြင့်လူနေမှုပုံစံတွေနဲ့ ပိုမို Smart ကျတဲ့ သုံးစွဲသူအများစု စုဝေးနေခြင်းပါ။ အဲ့ဒါမို့လည်း Facebook နဲ့မတူ တသီးတခြားကွဲထွက်နေပြီး ပြည်တွင်းရော ကမ္ဘာကျော် Celebrity အများစုရဲ့ Lifestyle ကို ပိုမို အနီးကပ် မြင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Instagram အသုံးပြုမှုတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းဆယ်လီတွေ မင်းသား၊ မင်းသမီးတို့ ထဲထဲဝင်ဝင်သုံးစွဲလာကြပါပြီ။ မြန်မာ့ Instagram နယ်ပယ်မှာတော့ နိုင်ငံတကာလောက် Follower မများရင်တောင်မှ Follower အများဆုံးဆယ်လီတွေထဲမှာ ပရိသတ်အားပေးအကြမ်းဆုံး Top Star4ဦးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပုံတစ်ပုံတင်လိုက်တိုင်း Like တွေ သောင်းချီတဲ့အထိ ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်း ခံရတဲ့ သူတို့ (4) ယောက်က ဘယ်သူတွေများပါလိမ့်?
(၁) ယွန်းဝတီလွင်မိုး ( yunwlm )
Follower 2သိန်းခွဲကျော်ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ Instagram အသုံးပြုမှု မကျယ်ပြန့်ခင်တည်းက သုံးနေခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေးတစ်ယောက်မို့ လတ်တလော သူမရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းတွေအရရော၊ ခုချိန်ထိ ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ အမူရာလေးတွေကြောင့်ပါ အချစ်မလျော့ဘဲ အားပေးခြင်းခံရသူပါ။
ပရိသတ်ထံမှ Like တွေ သောင်းချီထိ အမြဲရပြီး ခုလတ်တလော Like အများဆုံးပုံကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်ကမှ တင်ထားတဲ့ သူမနဲ့ သူမ ချစ်ရသူခင်ပွန်းတို့ ကမ်းခြေမှာ တူတူ Selfie ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပြီး Like တွေ ၂သောင်းကျော်ထိ အားရပါးရအားပေးခြင်းခံထားရသူလေးပါ။ ပုံလေးကလည်း ချစ်စရာလေးပါပဲ။
(၂) ရွှေမှုန်ရတီ ( Shwehmoneyati )
Follower 319,000 နဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ရွှေမင်းသမီးလေးကတော့ Facebook မှာသာမက Instagram မှာပါ အသက်ရှုရပ်တန့်စေလောက်တဲ့ Fashion အလန်းစားတွေနဲ့ ပရိသတ်အာရုံကို ခြွေချနိုင်သူပါ။
သူမရဲ့ ပုံလေးတွေကလည်း ဘာတင်တင် တခဲနက်အားပေးခံရပြီး ခုနောက်ဆုံး Like အများဆုံးပုံလေးကတော့ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ အရည်ပျော်သွားစေမယ့် သူမရဲ့ Selfie ပုံလေးပါ။ Like ပေါင်း 17,000 ကျော်နဲ့ ပရိသတ်အားပေးကြမ်းထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ Caption လေးကတော့ “အပြုံး စွဲလမ်းမိတဲ့ သူ့အပြုံး” ပါတဲ့။ ရဲရင့်အောင်သီချင်းစာသားလေးနဲ့ တကယ်လိုက်ဖက်နေအောင်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။
(၃) ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ( wutthmoneshweyi )
Follower 380,000 နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာလည်း Facebook မှာရော Instagram မှာပါ ပရိသတ်တွေ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးခြင်းကို ခံရသူပါ။
သူမဟာလည်း Instagram မှာပါ နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ သူမရဲ့တစ်ဦးတည်းသောအချစ်ဆုံးညီမလေး နဒီရွှေရည် မင်္ဂလာဆောင်သွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Instagram မှာ မျှဝေထားခဲ့တဲ့ ပုံလေးက အမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တစိမ့်စိမ့်ခံစားရစေပြီး ကြည့်သူတိုင်းကိုပါ ပီတိဖြာစေခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ Like ပေါင်း 14,000 ကျော်နဲ့ သူမရဲ့ပုံတွေထဲမှာ လတ်တလော Like အများဆုံး ရပြီး တခဲနက်အားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူပါ။ ပုံလေးကလည်း ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ။
(၄) နေခြည်ဦး ( Beautybynaychi )
Follower 163,000 ထိ ရှိပြီး Social Media ကို အလှုပ်ခတ်စေနိုင်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Top Star တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ Beauty Blogger လည်းဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးဟာဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ Fashion တွေ၊ အလှအပတွေ၊ Activities တွေကြောင့် အမြဲလိုလို ပရိသတ်အားပေးခြင်းကို ခံရသူပါ။
သူမကို အားပေးတဲ့ Fan တွေကလည်း Instagram ထိပါ အခိုင်အမာရှိပြီး ခုလတ်တလော Like အများဆုံးရထားတဲ့ပုံလေးကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ 19 ရက်နေ့က တင်ထားတဲ့ ထူးလိမ္မော်ခြံထဲက ပုံလေးပါ။ သဘာဝဆန်ဆန်လေးနဲ့ နေရောင်လေးတွေကြား ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီး Like တွေလည်း 10,000 ကျော်ထိ အားပေးခြင်း ခံထားရတဲ့ပုံလေးပါပဲ။ သဘောကျစရာလေးပါ။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ဒီလောက် Fan မများသေးပေမယ့် ခေသူတွေမဟုတ်တဲ့ တကယ့် Top Star တွေပါပဲ။ ဒီထဲမှာ ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးသူတွေရော ပါရဲ့လား? ဖြေသွားပေးကြဦးနော်။
Fashion အကျဆုံး မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ lifestyle တွေကိုလည်း တစ်နေရာတည်းမှာ ဝေဝေဆာဆာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Akhayar Lifestyle Instagram လေးကို Follow လုပ်ထားပြီး ဘယ်ပွဲလမ်းသဘင် ဘယ်နေရာအနေအထားနဲ့ ဘယ်လို Fashion မျိုးက အလိုက်ဖက်ဆုံးလဲဆိုတာ ဝင်လေ့လာလို့ရနေပြီနော်။ တစ်နေရာတည်းမှာဘဲ Fashion အကျဆုံး မိန်းကလေးတွေကို စုစည်းပေးထားတာမို့ Fashion Inspiration တစ်ခုအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ သေချာပေါက် Followထားသင့်တာအမှန်ပါပဲ။
Instagram မှာ အားပေးခံရဆုံး မွနျမာနိုငျငံရဲ့Top Star4ဦး
Instagram ဆိုတာက Facebook ပွီးရငျ အသုံးမြားဆုံး လူမှုကှနျယကျတဈခုပါ။ Facebook နဲ့မတူတာက Instagram မှာ High Resolution ပုံတှေ၊ အဆငျ့တနျးမွငျ့လူနမှေုပုံစံတှနေဲ့ ပိုမို Smart ကတြဲ့ သုံးစှဲသူအမြားစု စုဝေးနခွေငျးပါ။ အဲ့ဒါမို့လညျး Facebook နဲ့မတူ တသီးတခွားကှဲထှကျနပွေီး ပွညျတှငျးရော ကမ်ဘာကြျော Celebrity အမြားစုရဲ့ Lifestyle ကို ပိုမို အနီးကပျ မွငျတှနေို့ငျတာဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး Instagram အသုံးပွုမှုတိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျးဆယျလီတှေ မငျးသား၊ မငျးသမီးတို့ ထဲထဲဝငျဝငျသုံးစှဲလာကွပါပွီ။ မွနျမာ့ Instagram နယျပယျမှာတော့ နိုငျငံတကာလောကျ Follower မမြားရငျတောငျမှ Follower အမြားဆုံးဆယျလီတှထေဲမှာ ပရိသတျအားပေးအကွမျးဆုံး Top Star4ဦးလညျး ရှိပါသေးတယျ။ ပုံတဈပုံတငျလိုကျတိုငျး Like တှေ သောငျးခြီတဲ့အထိ ပရိသတျတှေ ခဈြခငျနှဈသကျခွငျး ခံရတဲ့ သူတို့ (4) ယောကျက ဘယျသူတှမြေားပါလိမျ့?
(၁) ယှနျးဝတီလှငျမိုး ( yunwlm )
Follower 2သိနျးခှဲကြျောကြျောပိုငျဆိုငျထားပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာ Instagram အသုံးပွုမှု မကယျြပွနျ့ခငျတညျးက သုံးနခေဲ့တဲ့ ပရိသတျအခဈြတျောလေးတဈယောကျမို့ လတျတလော သူမရဲ့ မင်ျဂလာသတငျးတှအေရရော၊ ခုခြိနျထိ ခဈြစဖှယျကောငျးတဲ့ အမူရာလေးတှကွေောငျ့ပါ အခဈြမလြော့ဘဲ အားပေးခွငျးခံရသူပါ။
ပရိသတျထံမှ Like တှေ သောငျးခြီထိ အမွဲရပွီး ခုလတျတလော Like အမြားဆုံးပုံကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ရကျကမှ တငျထားတဲ့ သူမနဲ့ သူမ ခဈြရသူခငျပှနျးတို့ ကမျးခွမှော တူတူ Selfie ဆှဲထားတဲ့ပုံလေးဖွဈပွီး Like တှေ ၂သောငျးကြျောထိ အားရပါးရအားပေးခွငျးခံထားရသူလေးပါ။ ပုံလေးကလညျး ခဈြစရာလေးပါပဲ။
(၂) ရှမှေုနျရတီ ( Shwehmoneyati )
Follower 319,000 နဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော ရှမေငျးသမီးလေးကတော့ Facebook မှာသာမက Instagram မှာပါ အသကျရှုရပျတနျ့စလေောကျတဲ့ Fashion အလနျးစားတှနေဲ့ ပရိသတျအာရုံကို ခွှခေနြိုငျသူပါ။
သူမရဲ့ ပုံလေးတှကေလညျး ဘာတငျတငျ တခဲနကျအားပေးခံရပွီး ခုနောကျဆုံး Like အမြားဆုံးပုံလေးကတော့ အပွုံးခြိုခြိုလေးနဲ့ အရညျပြျောသှားစမေယျ့ သူမရဲ့ Selfie ပုံလေးပါ။ Like ပေါငျး 17,000 ကြျောနဲ့ ပရိသတျအားပေးကွမျးထားကွတာတှရေ့ပါတယျ။ Caption လေးကတော့ “အပွုံး စှဲလမျးမိတဲ့ သူ့အပွုံး” ပါတဲ့။ ရဲရငျ့အောငျသီခငျြးစာသားလေးနဲ့ တကယျလိုကျဖကျနအေောငျကို ခဈြဖို့ကောငျးနတောပါ။
(၃) ဝတျမှုနျရှရေညျ ( wutthmoneshweyi )
Follower 380,000 နဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျဟာလညျး Facebook မှာရော Instagram မှာပါ ပရိသတျတှေ သညျးသညျးလှုပျအားပေးခွငျးကို ခံရသူပါ။
သူမဟာလညျး Instagram မှာပါ နာမညျကွီးသူဖွဈပွီး မကွာသေးခငျကမှ သူမရဲ့တဈဦးတညျးသောအခဈြဆုံးညီမလေး နဒီရှရေညျ မင်ျဂလာဆောငျသှားခဲ့တာနဲ့ပတျသကျပွီး Instagram မှာ မြှဝထေားခဲ့တဲ့ ပုံလေးက အမကွီးတဈယောကျရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို တစိမျ့စိမျ့ခံစားရစပွေီး ကွညျ့သူတိုငျးကိုပါ ပီတိဖွာစခေဲ့လို့ ပရိသတျတှရေဲ့ Like ပေါငျး 14,000 ကြျောနဲ့ သူမရဲ့ပုံတှထေဲမှာ လတျတလော Like အမြားဆုံး ရပွီး တခဲနကျအားပေးခွငျးကိုခံခဲ့ရသူပါ။ ပုံလေးကလညျး ကွညျနူးစရာလေးပါပဲ။
(၄) နခွေညျဦး ( Beautybynaychi )
Follower 163,000 ထိ ရှိပွီး Social Media ကို အလှုပျခတျစနေိုငျဆုံး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ Top Star တဈယောကျလညျးဖွဈ၊ Beauty Blogger လညျးဖွဈတဲ့ နခွေညျဦးဟာဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ တမူထူးခွားတဲ့ Fashion တှေ၊ အလှအပတှေ၊ Activities တှကွေောငျ့ အမွဲလိုလို ပရိသတျအားပေးခွငျးကို ခံရသူပါ။
သူမကို အားပေးတဲ့ Fan တှကေလညျး Instagram ထိပါ အခိုငျအမာရှိပွီး ခုလတျတလော Like အမြားဆုံးရထားတဲ့ပုံလေးကတော့ ဖဖေျောဝါရီလ 19 ရကျနကေ့ တငျထားတဲ့ ထူးလိမ်မျောခွံထဲက ပုံလေးပါ။ သဘာဝဆနျဆနျလေးနဲ့ နရေောငျလေးတှကွေား ကွညျ့လို့ကောငျးနပွေီး Like တှလေညျး 10,000 ကြျောထိ အားပေးခွငျး ခံထားရတဲ့ပုံလေးပါပဲ။ သဘောကစြရာလေးပါ။
နိုငျငံတကာနဲ့ ယှဉျရငျတော့ ဒီလောကျ Fan မမြားသေးပမေယျ့ ခသေူတှမေဟုတျတဲ့ တကယျ့ Top Star တှပေါပဲ။ ဒီထဲမှာ ကိုယျ့အကွိုကျဆုံးသူတှရေော ပါရဲ့လား? ဖွသှေားပေးကွဦးနျော။
Fashion အကဆြုံး မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှု၊ lifestyle တှကေိုလညျး တဈနရောတညျးမှာ ဝဝေဆောဆာကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ Akhayar Lifestyle Instagram လေးကို Follow လုပျထားပွီး ဘယျပှဲလမျးသဘငျ ဘယျနရောအနအေထားနဲ့ ဘယျလို Fashion မြိုးက အလိုကျဖကျဆုံးလဲဆိုတာ ဝငျလလေ့ာလို့ရနပွေီနျော။ တဈနရောတညျးမှာဘဲ Fashion အကဆြုံး မိနျးကလေးတှကေို စုစညျးပေးထားတာမို့ Fashion Inspiration တဈခုအနနေဲ့ မိနျးကလေးတှေ သခြောပေါကျ Followထားသငျ့တာအမှနျပါပဲ။